Ndi otu njem nlere anya nke Afrika na-aja Burkina Faso, Liberia, Niger, Sierra Leone mkpu na Tokyo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndi otu njem nlere anya nke Afrika na-aja Burkina Faso, Liberia, Niger, Sierra Leone mkpu na Tokyo
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Burkina Faso • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cote d'Ivoire • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • Akụkọ kacha ọhụrụ na Liberia • News • Akụkọ ọhụrụ Niger • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Sierra Leone • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
ahia ọdụm japan
Mba Afrika jisiri ike na gọọmentị Tokyo mechie ahịa ọdụ tupu nzukọ gọọmentị 29 nke Machị.
E zigarala Gọvanọ Tokyo, Yuriko Koike, akwụkwọ ozi sitere na mba anọ dị n'Africa, na-arịọ maka ichebe enyí n'ahịa ọdụ́.
Dị adị nke nnukwu ọdụ ọdụ ọdụ na Japan na-enwe mmetụta na nsogbu ọgbaghara, n'ụzọ nkịtị na n'ụzọ na-apụtachaghị.
Agbanyeghị na Japan kwetara imechi bụ ọdụ ọdụ na 2016, enwere ihe akaebe edepụtara nke azụmaahịa na-ezighi ezi na usoro adịghị mma na njikwa azụmaahịa ọdụ na Japan.
Mba anọ dị n'Africa na-arịọ gọọmentị obodo Tokyo ka ha mechie ahịa ọdụ́ tupu nzukọ ndị ọrụ ga-enyocha okwu a.
N’akwụkwọ ozi ha zigara Yuriko Koike, Gọvanọ Tokyo, ndị nnọchi anya gọọmentị Burkina Faso, Liberia, Niger, na Sierra Leone dere, sị: “N’echiche anyị, ichebe enyí anyị ka a ghara iji ọdụ́ na-azụ ahịa, ọ dị ezigbo mkpa na ọdụ Tokyo ahịa ga-emechi, na-ahapụ naanị ndị ọzọ.
“Ọ bụ ezie na ọkwa azụmaahịa na Japan agbadaala kemgbe ọ kachasị elu na 1980s, ịdị adị nke nnukwu ahịa mepere emepe Japan nwere mmetụta na nsogbu nsogbu ịchụ nta, na-arụ ọrụ ma na-apụ apụ, na-arụ ọrụ iji kpalie ọchịchọ na-aga n'ihu maka ọdụ́ mgbe ahịa ndị ọzọ na-emechi chebe enyí. ”
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na-akwado nkwado nke atụmatụ a site na Burkina Faso, Liberia, Niger, na Sierra Leon, ka Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke ATB kwuru, ugbu a na nleta gọọmentị na Ivory Coast.
Na 2016, Japan kwetara imechi ọdụ ọdụ ya na nzukọ 17 nke Nzukọ nke Ndị Mmekọ (CoP17) na UN Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Ma akwụkwọ ozi ndị ahụ kwuru na “ọ bụ ezie na e nwere ihe akaebe edepụtara banyere ahia na-ezighi ezi na usoro adịghị mma na njikwa azụmaahịa ọdụ na Japan, Gọọmentị Japan emeghị ihe iji mejuputa ntinye ya na imechi ahịa ọdụ ahụ, nke mere ka anyị rịọ ozugbo na Tokyo ka anyị mee ihe. ”
Mba anọ a bụ ndị otu jikọrọ aka n’Africa, otu mba iri atọ na abụọ nke Afrịka raara onwe ha nye ichekwa enyí ndị Afrịka gụnyere ịzụ ahịa ọdụ. Kansụl nke ndị okenye jikọrọ aka zigara gọvanọ Tokyo akwụkwọ ozi a na June 32, na-ama ya aka site na “isetịpụ ụkpụrụ atụ nke mba niile, ma duga Japan na ụzọ nchekwa nchekwa.”
Nzukọ ọzọ nke ọchịchị Tokyo Kọmitii Ndụmọdụ na Iwu Azụmaahịa Ivory , e boro ebubo ịtụle ahịa na ụkpụrụ ọdụ́ nke obodo ahụ, ga-ezukọ na Machị 29. Nzukọ a ga-emeghe nke ọhaneze, a ga-ebikwa ya. Ebe a site na 2: 00 rue 4: 00PM oge Tokyo (07: 00-09: 00 UTC). A na-atụ anya akụkọ sitere na Kọmitii Ndụmọdụ n'ime ọnwa ole na ole.
Omume njikọ a bụ akụkụ nke mbọ mba ụwa na-aga n'ihu iji kwenye Gọvanọ Koike na kọmitii ahụ imechi ahịa ọdụ ọdụ Tokyo ma tinye akwụkwọ ozi sitere na:
- 26 otu ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na nchekwa (February 18, 2021) (English) (Japanese)
- Association nke Zoos & Aquariums (July 31, 2020)
- Chekwaa enyí ndị ahụ (July 8, 2020)
- Onye isi obodo New York City, Bill de Blasio (May 8, 2019).
"Ekwesịrị ịkwụsị ahia Ivory ozugbo na Tokyo - etiti Japan maka ire ọdụ́ na mbupụ iwu na-akwadoghị - na-enweghị ichere maka nzaghachi mba," ka Masayuki Sakamoto, onye isi oche nke Japan Tiger na Elephant Fund na-ekwu. "Japan nọ n'azụ mba ndị ọzọ na-emechi ahịa ọdụ ya, yabụ ndị otu mba ga-enyocha ihe ga-eme na kọmitii ahụ."